विद्यालयमा ‘असर टेष्ट’ | Epradesh Today
Homeफिचरविद्यालयमा ‘असर टेष्ट’
विद्यालयमा ‘असर टेष्ट’
शैक्षिक अवस्था बुझ्दै तुलसीपुर उपमहानगर …
दाङ, ११ भदौ । शैक्षिक गुणस्तर खस्कदै गएको आरोप लागिरहेका बेला तुलसीपुरमा शिक्षाको वास्तविक अवस्था बुझ्न नयाँ सर्वे सुरु गरिएको छ । असर नामाकरण गरिएको सर्वेले शैक्षिक अवस्था बुझ्न सुरु भएको हो ।
कक्षा १ देखि ८ सम्मका प्रत्येक विद्यार्थीको सिकाइलगायतका विषयको वास्तविक अवस्था बुझ्न विश्वमा मान्यता प्राप्त ‘असर टेष्ट’ (वार्षिक शैक्षिक अवस्था सर्वे) दाङमा गर्न लागिएको हो ।
दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका अन्तर्गत रहेका एक सय ३९ विद्यालयका ३४ हजार विद्यार्थीहरुमा असर टेष्ट गरिदैछ । भदौ १ गतेदेखि सुरु भएको टेष्ट भदौ २९ गतेसम्ममा गरिने तुलसीपुर उपमहानगरपालिका शिक्षा महाशाखाका शिक्षाविज्ञ मुकुन्द रिजालले जानकारी दिए ।
तुलसीपुर उपमहानगरमा रहेका ७० सामुदायिक विद्यालय र ६९ निजी विद्यालयमा सर्वे सुरु गरिएको हो । जसका लागि एक सय ५० जना स्वयम्सेवक विद्यालयमा खटिएका छन् ।
उच्च शिक्षा पढिरहेका विद्यार्थीहरुलाई असर टेष्टमा स्वयम्सेवकको रुपमा परिचालन गरेको र त्यसको ब्यवस्थापन टिचफर नेपाल र नमुना युवा संसदले गर्दै आएको छ ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका शिक्षा महाशाखाको व्यवस्थापनमा तथा टिच फर नेपालको प्राविधिक सहयोगमा भारत र पाकिस्तानलगायतका देशमा सफल भएको र ३ करोड जनामा सफल परिक्षण गरिएको असर टेष्ट नेपालमै पहिलो पटक त्यो पनि सप्टवेयरमार्फत तुलसीपुरमा गर्न लागिएको शिक्षा महाशाखा प्रमुख भास्करराज गौतमले बताए ।
सबै विद्यालयको शैक्षिक अवस्था, गुणस्तर सिकाइको बारेमा असर टेस्टले अभिलेखिकरण गर्ने छ । त्यति मात्रै नभएर बालबालिकाहरुको पढाइलाई प्रभाव पार्ने तत्वहरुको पनि पहिचान गरिने प्रमुख गौतमले बताए ।
बालबालिकाको सिकाइ उपलब्धि र गुणस्तर कमजोर भइरहेको गुनासो छ, उनले भने वास्तविकता के हो ? भनेर यसले हामीलाई देखाएमा भावी योजना निर्माणमा सहयोग पुग्ने छ ।
अध्ययन र सर्वेको लागि मात्रै भन्दा पनि हाम्रो शिक्षालाई कसरी प्रभावकारी र उपयोगी बनाउन सकिन्छ र अहिलेको अवस्था के छ ? भन्ने बुझ्न असर टेष्टले भूमिका निर्वाह गर्नेछ । उनले भने, ‘यसको वास्तविक अवस्था सार्वजनिक भएमा विद्यालय, बालबालिका, अभिभावक र आम सरोकारवाला समक्ष पुग्ने छ ।’
अन्यत्र हुने सर्वेमा नमुना सर्वेक्षण मात्रै गरिदै आएको थियो । त्यो पनि केहि विद्यार्थीहरुको आधारमा समग्र रिपोर्ट ल्याउने गरिदै आएको छ, महाशाखाका शिक्षाविज्ञ मुकुन्द रिजालले भने, तर हामीले पूरै विद्यार्थीमा नमुना तरिकाले सर्वे गर्न थालेको छौ,
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका अन्तर्गत रहेका एक सय ३९ विद्यालयका ३४ हजार विद्यार्थीहरुमा असर टेष्ट गरिदैछ । अहिलेसम्म १३ हजार विद्यार्थीमा यो सर्वे भइसकेको छ । भारत, पाकिस्तानबाट सुरु हुँदै १५ राष्ट्रमा गरिएको ‘असर टेष्ट’लाई तुलसीपुरमा सप्टवेयरमा राखेर सर्वे थालिएको हो ।
अहिलेसम्म १३ हजार विद्यार्थीमा यो सर्वे भइसकेको छ । बाँकीको पनि छिट्टै हुन्छ । नेपालमा सन २०१७ मा बुढानिलकण्ठ विद्यालयले गरेको थियो । त्यो अहिले पनि छ । पालिकाहरुमा दाङको तुलसीपुर उपमहानगरले पहिलो पटक नेपालमा गर्न लागेको रिजालले बताए ।
भारत, पाकिस्तानबाट सुरुहुँदै १५ राष्ट्रमा गरिएको ‘असर टेष्ट’लाई तुलसीपुरमा सप्टवेयरमा राखेर सर्वे थालिएको हो । स्वयमसेवक शिक्षकले मोवाइलबाट नै विद्यार्थीको अवस्थालाई तत्काल इन्ट्री गर्ने गरी सर्वेको सप्टवेयर तयार पारिएको छ ।
त्यो विवरण सिधै शिक्षा शाखाको कन्ट्रोल शाखामा जाने छ । नेपाली, अंग्रेजी, गणित विषयमा केन्द्रित रहेर परिक्षण गरिन्छ । विद्यार्थीको, सिकाइ, चिनाइ, बुझाइ, लेखाइ, पढाइ सीपलाई बढी केन्द्रित असर टेष्टमा गरिएको छ, शिक्षाविज्ञ रिजालले भने,
‘यसबाट घरपरिवारको अवस्था, अभिभावकको अवस्था, सामाजिक, रहनसहन तथा वातावरणको समेत अवस्था बुझिने छ ।
बालबालिकाहरुको घरमा पढाइको वातावरण, अभिभावकको भूमिका कस्तो छ ? भन्ने यसले देखाउने असरका म्यानेजर रतन देवकोटाले बताए ।
‘हामी विद्यार्थी, कक्षाकोठा, विद्यालय र उसको सिकाइको अवस्थामा बुझ्छौ’ देवकोटाले भने, ‘यो सँगै घर परिवारको अवस्था र वातावरण पनि बुझ्ने छौ । विद्यालयको अवस्था पनि सँगै बुझ्छौ । यसको खास उद्देश्य शिक्षाको अवस्था बुझ्ने नै हो’ उनले भने ‘यसमा अभिभावक र शिक्षाको अवस्था पनि जोडिएको छ ।
अभिभावको पेशा व्यवसाय र विद्यार्थीमा अहिलेको प्रविधिको प्रयोगको बारे समेत अध्ययन गर्ने गरेका छौ ।’ एउटा विद्यार्धीसँग बढीका १५ मिनेटको समयमा यो सर्वे गरिन्छ । मध्यमखाले प्रश्नबाट सुरु हुने टेष्ट दुई भागमा बाँडिएको छ ।
मध्य प्रश्नको उत्तर दिए माथि बढ्ने र दिन नसके त्यसबाट तलतिरको प्रश्नमा जाने गरिन्छ । कक्षा १ देखि ८ सम्मका विद्यार्थीहरुका गरिन सुरु गरेको असर टेष्टले शैक्षिक अवस्था अझ बढाउने विश्वास लिइएको महाशाखाका शिक्षाविज्ञ रिजालले बताए ।
हालसम्म ३६ विद्यालयका टेष्ट गरिसकिएको छ । भदौ २९ गते सम्ममा नगरका सबै विद्यालय र सबै विद्यार्थीमा यो पूरा गरिने छ । मंगलबार मात्रै अमर मावि कालाखोला, मावि कालाखोला र ज्ञानज्योति पब्लिक स्कुल बम्नैमा असर टेष्ट गरिएको छ ।